प्रधानमन्त्री ओलीकाे स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पतालले निकाल्याे यस्ताे विज्ञप्ति
काठमाडौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर ट्रान्सपालान्ट सेन्टर, महाराजगञ्जमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया केहीबेर अघि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् -किन दिनदिनै अस्पताल पुगिरहन्छन प्रधानमन्त्री ?
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भन्दै शल्यक्रियापछि उच्च साबधानी र निगरानीका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा विज्ञसहितको टोली खटिरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले उक्त कुरा बताएका हुन् । शल्यक्रियापछि केही दिन प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमै रहने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया प्रधानमन्त्रीका नीजि चिकित्सक डा. दिव्या सिंह र डा. रमेश सिंह लगायतको टोलीले गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस् - प्रधानमन्त्री ओलीलाई एपेन्डिसाइटिस, शल्यक्रियाको तयारी
पेटमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली बिहान ९ बजे अस्पताल पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आरामको आवश्यकता भएको हु्नाले केही दिन अस्पतालमै रहन उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले आग्रह गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् - सकियो प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया, तीन दिन अस्पतालमै राखिने
अहिले महोत्तरीको पूर्वीदक्षिणी सीमा मटिहानीदेखि पश्चिमीदक्षिणी सीमा खैरबनीसम्मको दशगजा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले संयुक्त गस्ती गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । संयुक्त सुरक्षा गस्तीले उपनिर्वाचनका मुखमा सीमाक्षेत्रबाट हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणसँगै साना हतियारको ओसारपसार, लागुऔषध कारोवार र मानव तस्करी रोक्न र सीमा विवाद बढ्न नदिन सहयोग पुग्ने प्रजिअ खत्रीको बिश्वास छ ।
पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र मटिहानी एवं बलवा नगरपालिकाका तीन वडाका वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । बलवा – २ र ८ एवं मटिहानी–६ सहित तीन वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा अहिले पिपरा, बलवा र मटिहानीमा राजनीतिक चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यवस्था मिलाइसकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा झाले जानकारी दिइन् ।